मिस इन्डियाको पहिरन नेपाली ढाकाको कपडा ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
मिस इन्डियाको पहिरन नेपाली ढाकाको कपडा !
प्रकाशित मिति: ८ भाद्र २०७१, आईतवार August 24, 2014
भदौ ८, काटमाडौं– आधुनिकता र फेसनेबल हुने नाममा हामी नेपालीहरु हाम्रो ढाका टोपी र ढाकाका अन्य कपडा प्रयोगमा ल्याउन बिस्तारै छोडिसकेका छौ । तर हाम्रो ढाकाको कपडा भने बहुचर्चित फेसन सो हरुमा चर्चित व्यक्तिहरुले अन्तरास्ट्रिय मंचहरुमा लागाउने गरेका छन् ।
नेपाली ढाका बाट बनेको पहिरनमा मिस इन्डिया २०१३ रूहानी शर्मा
हालै इन्डोनेसियाको सुराबायामा सम्पन्न एशियन फेशन वीक २०१४ मा पनि मिस इन्डिया हाम्रो ढाकाबाट बनेको कपडामा देखा परिन । नेपाली फेशन डिजाइनर मदन पौडेलले डिजाइन गरेका नेपाली ढाका कपडाबाट तयार गरिएको पहिरनमा मिस इन्डिया २०१३ रूहानी शर्मा –याम्पमा उत्रिएकि हुन् । फेशन सप्ताहमा क्याजुअल ड्रेस १० वटा, कल्चरल ड्रस ५ वटा , इको फ्रेंडली ५ वटा , मास्टर पीस एउटा , एभन्ट गार्ड एउटा र हब्ट कटयर एउटा प्रदर्शन गरिएको थियो । स्थानीय मोडेलहरुले पनि ती पहिरन लगाएर –याम्प क्याट वाक गरेका थिए ।
फेशन वीकमा नेपालका साथै एसियाका ५८ देशहरुको सहभागिता रहेको थियो । नेपाली इतिहासमा नै पहिलो पटक अन्तरास्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा नेपाली पहिरन समेत लगाउने गरि सहभागिता जनाईएको हो । आगामी वर्ष देखी पाँच जना नेपाली फेशन डिज़ाइनरहरुलाई एशियन फेशन वीक मा सहभागिता जनाउने अवसर उपलब्ध गराउने नेपाल फेशन महासंघका अध्यक्ष नबिन लुइँटेलले बताउनु भयो ।
गायक ईश्वर पोखरेलको नयाँ साँगीतीक कोशेली “चौबिस घण्टै” बोलको गीत सार्बजनिक :
महेश्वर शर्मा सिड्नी,अष्ट्रेलिया गायक ईश्वर पोखरेलको नयाँ साँगीतीक कोशेली "चौबिस घण्टै" बोलको […]